Asa famitana ny Rovan’Antananarivo: natomboka tamin’i Besakana, tsy maintsy vita ny 2020 | NewsMada
Asa famitana ny Rovan’Antananarivo: natomboka tamin’i Besakana, tsy maintsy vita ny 2020
Fanamby goavana. Marina fa efa maro ny asa vita, saingy mbola maro lavitra koa ny miandry amin’ny fanarenana ny Rovan’Antananarivo. Tsy maintsy tontosa anefa ny asa rehetra amin’io taona ho avy io.
Hazo lehibe iray, nentina vatan-dehilahy maromaro, nihazo ny Kianjan’Andrianjaka. Nanamarihana ny fanombohan’ny asa famitana ny an’Anatirova, omaly, io. Ny fanarenana an’i Besakana no hanombohana ny asa, amin’ny maha lapa tranainy indrindra azy. Lanonana nanehoana ny kolontsaina, nametrahana ny haja amam-boninahitra mendrika izany toerana anisan’ny manan-tantara indrindra eto Madagasikara izany no notontosaina teo Anatirova, manoloana ny toerana misy an’i Besakana.
“Ny famitana ny asa fanarenana ny rova dia hanandratana indray ny fiandrianam-pirenena ary hamelomana indray ny ambom-pom-pirenena… Raha tsy mametraka fanamby isika tsy handroso mihitsy ity firenena ity…Ny afo izay nandoro azy dia ho solointsika afon’ny fitiavan-tanindrazana ao am-pontsika tsirairay…zava-dehibe ny fotoana androany, satria fanajana ny fototra sy fanomezan-kasina ny loharano niaviana” , hoy ny ampahany tamin’ny kabarin’ny filoham-pirenena, Rajoelina Andry. Araka izany, hihazakazaka ny asa aorian’izao, satria mbola lavitra ezaka ny sa fanarenana ny ao Anatirova rehetra, indrindra ny lapan’i Manjakamiadana.
Nialoha izany, naneho ny fahavononany hiara-kanatratra ny fanamby napetraky ny filoha ny minisitry ny kolontsaina sy ny serasera, Andriatongarivo Lalatiana, nandritra ny kabariny. Ankoatra ny famerenana kely ny tantara, nizara ny fijery mizotra mankany amin’ny famohazana ny ambompom-pirenena koa ny minisitra. Hanana anjara biriky goavana ny minisitera anatin’ny fanohizana ny asa.
Tazana nandritra ny lanonana ireo raiamandreny ara-drazana, mpandala sy mpitahiry ny fomba avy amin’ny lafivalon’ny Nosy. Tonga nanotrona ity fotoan-dehibe ity koa ireo olo-manan-kaja maro sy ireo masoivoho vahiny miasa sy monina eto amintsika.
Nizara ny kanto nandritra ny lanonana kosa r’Imbosa, ny tarika Randria Ernest zanany, ny Cie Rary ary ny Tana Gospel Choir.